डिभोर्सपछि रवीलार्इ इशा लामिछानेले लेखिन् चाैथो सम्बन्धको मार्मिक संदेश - Muldhar Post
डिभोर्सपछि रवीलार्इ इशा लामिछानेले लेखिन् चाैथो सम्बन्धको मार्मिक संदेश
पत्रपत्रिकाट २०७५, २६ पुष बिहीबार 310 पटक हेरिएको
स्मार्ट र प्रतिभाशाली हुनुहुन्थ्यो । चलाख पनि । एफएममा काम गर्न थालेदेखि उहाँको लोकपि्रयता बढिरहेको थियो । खासगरी केटीहरु उहाँको आवाज र व्यक्तित्वका प्रशंसक थिए । केटीहरुका चिठी धेरै आउँथे । फोन पनि आउँथे । कुनै-कुनै चिठीले त मेरो मनमा चिसो पस्थ्यो । आखिर उमेरले पनि कच्चै त थिएँ । मैले डिभोर्स गरेलगत्तै रवीजी र दुई छोरीको नाममा ‘आर थ्री र लभ साइन’ लेखिएको ट्याटु खोपाएँ । यो ट्याटुले मलाई सदा उहाँको अनुभूति गराइरहने छ । डिभोर्सपछि पनि मैले आफ्नो थर लामिछाने नै लेखिरहेकी छु । उहाँ मेरो श्रीमान नरहे पनि मेरो छोरीहरुको बाबु त आजीवन हो नि ।
बिहेलगत्तै म गर्भवती भएँ । १९ वर्षमै जेठी छोरी जन्माएँ । त्यसपछि मेरो पढाइ अघि बढ्न सकेन । रविजी पनि पढाइ छोडेर करिअरमै फोकस हुनुभयो । बिहेको केही वर्षपछि रविजीको दाइहरुसँग खटपट पर्‍यो । एकजना दाइ पनि सञ्चारकर्मी भएकाले उछिनपाछिन भयो होला । अरु कारण भने जान्दिनँ । मलाई भने दाइहरुले केही नराम्रो गर्नुभएको होइन । दाजुभाइको मनमुटाब बढ्दै गएपछि हामी छुट्टएिर बस्यौं । बानेश्वरमा मासिक ८/९ सय रुपैयाँको एउटा कोठा लिएर केही समय गुजारा गरियो । रविजीको राम्रो हुँदै गएपछि केही समयपछि हाँडीगाउँमा ३ कोठाको फ्ल्याट लियौं । रविजी दिनभरि बाहिरै हुनुहुन्थ्यो । म घरमा छोरी स्याहारेर बस्थेँ ।
रविजी आफ्नो प्रोफेसनप्रति पहिलेदेखि नै डेडिकेटेड हुनुहुन्थ्यो । उहाँको प्राथमिकतामा पहिलो नम्बरमा काम, दोस्रोमा साथीभाइ र तेस्रोमा मात्रै परिवार आउँथ्यो । पनि पढ्नुहोस रवि लामिछानेको वयानः वर्षौंसम्म सोफामा सुतेँ, रोएर रात काटेँ हरेक श्रीमतीले आफ्नो श्रीमानसित बढीभन्दा बढी समय बिताउन चाहन्छे । श्रीमानले घरको काम र बच्चाको हेरचाहमा साथ देओस् भन्ने चाहन्छे । म पनि चाहन्थेँ ।
अमेरिका गएको ६ महिनामा भिसा प्रक्रियाका लागि उहाँ नेपाल फर्किनुभयो । मलाई फेरि गर्भवती बनाएर उहाँ फेरि अमेरिका जानुभयो । अब मेरा काँधमा दुई छोरीको जिम्मेवारी आइपर्‍यो । छोरी जन्माउने क्रममा सासूआमाले सहयोग गर्नुभयो । न्वारन सकेपछि माइत गएँ । माइतीको सहयोगले गर्दा छोरीहरु हुर्काउन केही सजिलो भयो ।
रविजी अमेरिका फर्किएको केही समयपछि मलाई अर्को टर्चर सुरु भयो । मैले विभिन्न व्यक्तिहरुका मुखबाट रविजीको अमेरिकामा एकजना विवाहित नेपाली महिलासित अफेयर चलिरहेको भन्ने गाईंगुईं सुन्न थालेँ । सुरुमा त हल्ला मात्रै होला भनेर त्यति ध्यान दिइनँ । तर, हल्ला बाक्लो हुँदै गयो । मेरो परिवार र आफन्तहरुको कानमा समेत यो कुरा पर्‍यो । जसले पनि यही कुरा सोध्न थाले, ‘के हो, तिम्रो बुढा त अमेरिकामा अर्कैसित बस्छ रे नि ?’ मैले त्यस्तो केही होइन, झूटो हल्ला हो भनेर टारिदिएँ ।
हुँदाहुँदा म आफ्नो मामाघर पनि जान नसक्ने अवस्था आयो । मानसिक तनाव बढ्दै गयो । रविजीलाई फोनमा सोध्थेँ, यस्तो हल्ला सुनिरहेको छु, के हो भनेर । उहाँले ठाडै नकार्नुहुन्थ्यो । तर, उहाँहरुका थरीथरी फोटोहरु बाहिर आउन थालेपछि मित्रता मात्र होला भनेर पत्याउन गाह्रो हुँदै गयो । त्यहीबेलादेखि हो मैले डिप्रेसनको औषधि खानुपरेको ।
जसोतसो आफूलाई सम्हाल्दै दुई छोरीलाई लालन-पालन र शिक्षादीक्षा दिलाउँदै गएँ । घरमा एकजना बहिनीलाई काम सघाउन राखेकी थिएँ । रविजीले अमेरिकाबाट पैसा भने नियमित पठाइदिनुहुन्थ्यो । पैसाको दुःख हुन दिनुभएन । अर्कोसित अफेयरमा रहे पनि उहाँले मलाई अमेरिकामा ल्याउन प्रोसेस गरिरहनुभएको थियो । प्रोसेस पूरा गरेर २००८ मा म दुई छोरीहरु लिएर अमेरिका गएँ । त्यतिबेलासम्म उहाँले बाल्टिमोरमा घर र गाडी जोडिसक्नुभएको रहेछ ।
म अमेरिका गएपछि रविजी ती महिलासँग टाढिनुभयो । दुवैजना विवाहित भएकाले सम्वन्धलाई निरन्तरता दिन सजिलो पनि थिएन उहाँहरुलाई । म अमेरिका गएलगत्तै ती महिला रविजीसँग रिसाएर नेपाल फर्किनुभएछ । जहान-परिवारवाली व्यक्ति भएको हुनाले म ती महिलाको नाम लिन सक्दिनँ । अमेरिकामा सँगै बसेपछि दाम्पत्य जीवन सुखद होला भन्ने कल्पनामा रमाएकी थिएँ । तर, मैले सोचेजस्तो भएन । किन-किन उहाँ मसँग तर्किनुहुन्थ्यो । मैले असन्तुष्टिको कारण सोध्दा पनि केही बताउनुभएन । मन खोलेर कहिल्यै कुरा गर्नुभएन । छोरीहरुलाई भने माया गर्नुहुन्थ्यो । अहिले पनि गर्नुहुन्छ ।
नेपालमा पनि रविजी मसित प्रत्यक्ष कुरा गर्नै नचाहने । आफ्नोतर्फबाट अख्तियारनामा दिएर एक व्यक्ति भिडाउनुभएको थियो । उसैसँग मैले डिल गर्नुपथ्र्यो । नेपालमा श्रीमानले पनि सम्वन्धविच्छेदको मुद्दा दिन पाउने व्यवस्था भदौ १ बाट लागू भएको रहेछ । त्यसको ३/४ दिनमै उहाँले डिभोर्सको मुद्दा दायर गरिसक्नु भएकोरहेछ । मैले नेपाल आएर फेरि पनि अन्तिम प्रयास गरेँ मिल्नका लागि । तर, उहाँ भेट्नै नआउने । मैले पनि उहाँको एजेन्टमार्फत खबर पठाइदिएँ कि नभेट्ने हो भने बहुविवाहको मुद्दा लगाएर जेल पठाइदिन सक्छु ।
धम्कीमात्रै दिएकी थिएँ । मुद्दा लगाउने सोच त थिएन । तर, यसले काम गर्‍यो । उहाँ बल्ल भेट्न आउनुभयो । मैले भनेँ, ‘अझै पनि केही बिग्रेको छैन, पुराना कुरा भुलेर नयाँ जीवन अघि बढाउँ ।’ उहाँले ठाडै नकार्नुभयो ।
उहाँ आफ्नो काठमाडौंमा रहेको अपार्टमेन्ट र अमेरिकाको घर दुबै मलाई दिन तयार हुनुहुन्थ्यो । यसरी डिभोर्सका लागि आफ्नो सबै सम्पत्ति सुम्पिन पनि तयार हुनुको पछाडि एउटै कारण थियो, उहाँको नयाँ अफेयर । रविजी केही समयदेखि एक डिभोर्सी महिलासँग अफेयरमा हुनुहुँदो रहेछ । उहाँहरुबीच ईंगेजमेन्ट समेत भइसकेको हल्लासमेत सुनेँ । सत्य हो कि होइन थाहा छैन । तर, विवाहका लागि मसितको सम्वन्ध तोड्नैपर्ने वाध्यता रविजीलाई थियो । त्यसैले आफ्नो बाटो क्लियर गर्नका लागि सबैथोक सुम्पन तयार हुनु भएको हो ।
तर, उहाँको हतार उहाँलाई नै थाहा थियो । भावनात्मकरुपमा वर्षौंदेखि एक्ली थिएँ, अब कानूनी रुपमा पनि एक्ली भएकी छु । छोरीहरुप्रतिको जिम्मेवारी बाँकी छ । उनीहरुको आर्थिक दायित्व रविजीले लिनुभएको छ । तर, अभिभावकत्व त मैले नै दिनु छ ।
कागजीरुपमा डिभोर्स गरे पनि रविजीलाई मैले आफ्नो मनबाट निकाल्न सक्दिनँ । कहिल्यै निकाल्ने पनि छैन । म मरेपछि मात्रै उहाँलाई बिर्सिन सक्छु । मैले डिभोर्स गरेलगत्तै रविजी र छोरीका नाममा ‘आर थ्री र लभ साइन’ लेखिएको ट्याटु खोपाएँ । यो ट्याटुले मलाई सदा उहाँको अनुभूति गराइरहनेछ । डिभोर्सपछि पनि मैले आफ्नो थर लामिछाने नै लेखिरहेकी छु । धेरैले मलाई थर किन चेञ्ज नगरेको भनेर सोध्नुभएको छ । म भन्न चाहन्छु कि यो थरमा मेरो हक लाग्छ । मैले २५ वर्षसम्म बोकेर हिँडेको थर कसरी तुरुन्तै निकालेर फ्याकौं ? अहँ सक्दिनँ । उहाँ मेरो श्रीमान नरहे पनि मेरा छोरीहरुको बाबु त आजीवन हो नि ।
जहाँसम्म मेरो जीवनको सवाल छ, त्यसबारे केही निर्णय लिएको छैन । तिमी पनि अर्को बिहे गर न भन्नेहरु धेरै छन् । मैले माथि पनि भनेँ कि डिभोर्स गरेका पुरुषलाई अर्को घर बसाउन जति सजिलो छ, महिलालाई छैन । त्यसमाथि यति ठूलो चोटबाट निस्कन मलाई समय लाग्छ । भविश्य त कसले देखेको छ र होइन ? (कुराकानीमा आधारित) अनलाइन खबबाट